Madaxweynaha Kenya oo DF ka dalbaday in xayiraadda ay qaado Khaadka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi ( Mareeg)-Madaxweynaha Dowladda Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay soo fara geliyay xayiraadaha KMG ah ee la saaray Diyaaradihii Khaadka u iib keeni jiray Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Kenyatta ayaa xiriir waxuu la soo sameeyay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxmuud, si uu uga hadlo arrimaha Khaadka.
Afhayeenka Madaxtooyada Dalka Kenya, Eric Kiraithe ayaa waxuu shaaca ka qaaday in Madaxweynaha Soomaaliya laga dalbaday in soo celiyo ama ogolaado in Khaadka la keeno Magaalada Muqdisho.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu tilmaamay in Koox ka socota Wasaarada Arimaha Dibadda ee Dalka Kenya in ay u soo diri doonaan Magaalada Muqdisho, si loo soo celiyo xiriirka wanaagsan ee labada Dowladood.
Hadalka Madaxtooyadda Dalka Kenya ayaa u muuqda mid raali gelin looga bixinayo booqashadii Guddoomiyaha Gobolka Meru uu ku tagay Magaalada Hargeysa, taasi oo ka careysiiyay Xukuumadda Soomaaliya.
Sikastaba, Khaadka ayaa loo arkaa in uu dhibaato dhaqaalo iyo mid caafimaadba uu ku hayo Bulshada Soomaaliyeed maadaama uu Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed uu ka luminayo malaayiin doolar islamarkaana lacagtaasina ay u xarooneyso Kenya.
A Riverbout Chef With Ideas For His Tiny Galley